Ganacsi - Sabahionline.com
Shirkadaha taleefannada Soomaaliya oo isku xiray adeeggooda
2014-07-30 Dadka isticmaala taleefannada moobiilka ee jooga koonfurta Soomaaliya waxaa u suuragali doona in ay wacaan dadka isticmaalaha sharikadaha kale kadib heshiis dhexmaray Horumuud Telecom, NaitonLink iyo Somtel.
Maalgelinta Bangiga Adduunku ku sameeynayo jidka tareenka oo ujeedkiisu yahay in Tansaaniya looga dhigo albaab goboleed
2014-05-12 Mashruuca ayaa beegsanaya inuu kor u qaado ganacsiga, shaqooyin abuuro, kana dhigo jidka Dar es Salaam iyo Isaka marinka gaadiidka tagaya dariska gobolka oo aan baddu marin.
Ganacsiga caanaha ee Hargaysa oo deeq EU ah ka faaiidaysanaya
2013-12-05 Midawga Yurub ayaa ballan qaaday 4 milyan oo lacagta euro-ga ah si loogu hormariyo waaxda caanaha ee gobolka Somaliland, taas oo ku tiirsan caanaha boodhaha oo waddanka la keeno inkasta oo ay jirto in waddanku leeyahay xoolo badan.
Kenyanka oo u arkay dhaqashada ayaxa ganacsi leh dhadhan iyo nafaqo
2013-11-22 Dhaqashada ayaxa si loogu iibiyo cunno ahaan ayaa noqday mid ka mida qaababka ay Kenyanku u sameeyaan dakhliga iyaga oo sidaana ku haqab-tiraya baahida cunno ee dalka.
Dhaqashada guuguulaha oo aad loo maal-gashanayo Kenya
2013-11-05 Dhaqashada guuguulaha si looga helo ukun iyo hilib ayaa Kenya ka noqonaya ganacsi aad loogu daatay oo macaash badan laga sameeyo, iyada oo la filayo in 5,000 oo ruqsadaha dhaqashada guuguulaha ah laga bixiyo Kenya dhammaadka 2013-ka.
Suuqlayda Soomaalida ah oo ka faa'idaysanaya goobaha lacag la'aanta ah ee suuqa Muqdisho laga siiyay
2013-11-01 U raridda suuqleeyda waratada ah loo rarayo dabakaayooyinka ku dhexyal suuqa Bacadlaha waa arrin u fiican ganacsiga waxayna kor u qaadaysaa ammaanka waddooyinka ciriiriga ah ee magaalada Muqdisho, sida ay sheegayaan ganacsatada yaryar iyo mas'uuliyiin.
Adeegga cusub ee taksiyada Muqdisho oo dhalinyarada siinaya shaqooyinkii ay u baahnaayeen
2013-09-17 Iyaga oo dhalinyarada shaqo uga dhigaya wadidda takaasida mootooyinka ah, ayaa ganacsatada iska leh shirkadda Shaqo Abuur waxa ay rajaynayaan in ammaanka Muqdisho uu hagaago.
Madaxa cusub ee kooxda Nairobi ee danaha ganacsatada u ololalaysa oo ka warramay himiladiisa
2013-09-11 Ammaanka hagaagay iyo isbaddalada sharciyada baabur dhigashada ee caasimadda Kenya ayaa qeyb ka ah qorshaha Guddoomiyaha Ururka Ganacsatada Bartamaha Gobolka Nairobi David Gachuru.
Garoonka diyaaradaha Muqdisho oo isku diyaarinaya maamul cusub
2013-09-05 Mas'uuliyiinta Soomaalida ayaa sheegaya in uunan jiri doonin wax hakad ah oo ku yimaada ammaanka iyada oo shirkad cusubi isu diyaarinayso in ay la wareegto maamulka Garoonka Caalamiga ah ee Aden Cadde.
Wadhatada Gaarisa oo ka fikiraya khiyaaraadkooda iyada oo xoog uga saarid waddooyinka ah ay socoto
2013-08-20 Cagafcagafyada waawayn ayaa bilaabay in ay burburiyaan dukaamada yar yar ee ay wadhatadu ku lahayd Waddada Kismaayo iyada oo qayb ka ah qorshe lagu baabi'inayo 1,000 dhisme oo ay madaxdu leeyihiin waxay keenayaan khatar dhinaca caafimaadka iyo ammaanka ah.
Beeralayda Kenya oo dhaqanaya dagiiranta
2013-08-19 Dalabka uunan noocisu horey u jiri jirin ee hilbka iyo ukumaha dagiiranta ee soo ifbaxay bilihii ugu dambeeyay ayaa ku riixay kuwa leh hal-abuurka ga...
Shirka maalgashiga Soomaaliya oo aad loo danaynayo iyo xukuumadda oo balamo qaaday
2013-05-31 Ka qayb galayaasha ayaa sheegay in ay jiraan fursado ifaya oo ah dhinaca maalgashiga Soomaaliya laakiinse waxay taxadar ka muujiyeen in sharciyo loo baahan yahay inta maalgashadayaasha intooda badan aysan waddanka maalgashanin.
2013-05-24 Shirka iyo Bandhiga Dib-u-dhiska iyo Maal-gashiga Soomaaliya ee Nairobi ayaa la qorsheeyay -- oo loo muddeeyay 28-29-ka Maajo -- ayaa maal-galiyayaasha ku dhiirri-galin doona in ay gacan ka geeystaan dib-u-dhiska Soomaaliya.
2013-05-20 Iyada oo loo marayo tartan cusub, ayay shirkaddan isgaadhsiintu ku dhiirri-galinaysaa dhalinyarada Kenya in ay sameeyaan barnaamijyada loo istcimaalo moobiillada kuwaa oo laga samayn karo lacag saameeyn wanaagsanna ku yeelan kara dalka.
Soomaaliya oo horumarka dhisaysa iyadoo adeegsanaysa kaalmada shirka London
2013-05-10 Kaqeyb galayaasha shirka ayaa Soomaaliya u yaboohay caawinaad $450 milyan oo doolar ah si looga caawiyo xukuumadda Soomaaliya inay dib u dhisto dalka iyo ciidamadeeda xoogga.
Haweenka Kenya oo ka faaiidaysanaya dhaqanka Soomaalida ee cabitaanka shaaha
2013-01-31 Iibinta shaaha ayaa siisay madax banaani dhinaca maaliyadda ah haween badan oo ka shaqeeya dukaamo yar yar oo waddooyinka Gobalka Waqooyi Bari Kenya ku yaala.
Beeraha soo saara waxyaabaha laga sanceeyo caanaha oo soo jiitay danaynta xaafadaha Nairobi
2013-01-10 Beeraaha heerka yaryar ee sanceeya caanaha ayaa kasoo shaac baxay guud ahaan Nairobi, taasoo ah waddo ay dowladdu dhiirri-galinaso iyadoo ay jirto shuruuc mamnuucaysa in xoolaha lagu dhaqo gudaha magaalada.
Waratada oo khilaaf kala dhexeeyo masuuliyiinta, ganacsiyada badhtamaha Nairobi
2013-01-04 Maadaama ay si sharci darro ah ugu shaqaystaan dhinacyada waddooyinka badhtamaha Nairobi, garab-raratada ayaa sababay dhibaatooyin dhanka amniga ah waxayna waxyeelaynayaan ganacsiyada sharciyaysan.
Dumarka Kenya ee wada tagaasida mootooyinka ah ee boda boda oo jabiyey xadidkii jinsiga
2012-12-27 Laba dumar oo Kenyan ah oo naftooda awood dhaqaale ku siinaya in ay galeen shaqada tagaasida mootooyinka ah, kuwaas oo hormood u noqday dumarka kale oo doonaya madax-banaani dhaqaale.
Dhalinyarada Kenya oo geed dhulkii qabsaday ka samaystay ganacsi faa'iido badan
2012-12-12 Geedkan oo bari la necbaan jiray loona yaqaano mathenge wuxuu hadda noqday mid ay dhalinyaradu ka helaan dakhli iyo awood, maadaama geedka aan dhulka hore looga heli jirin hadda loo isticmaalo in laga sameeyo cabitaan iyo bur.
War-lalis cusub oo Radio Hargeisa u saamaxay in caalamkoo dhan laga dhegaysto
2012-11-08 Dawlad goboleedka Somaliland waxay rakibtay war-lalis mawjad gaaban oo quwadiisu tahay 100-kiiloowat, kaasoo idaacadda u saamaxaya in markii ugu horaysay ay caalamkoo dhan warka u tabiso.
Ganacsiga goobaha qurxinta dumarka oo dib uga soo laabtay Muqdisho
2012-08-20 Dumarka jooga caasimadda Soomaaliya ayaa mar kale xornimo u helay in ay furtaan goobaha la-isku qurxiyo, oo la mamnuucay intii ay al-Shabaab joogeen.
Dagaalka Siyaasadda oo kor u qaaday sicirka hoteelada Muqdisho
2012-08-03 Boos celinta hoteelada ayaa kordhay iyada oo ay sababatay shirwaynaha Golaha deegaanada Qaranka iyo dadka oo qurbaha ka soo noqonaya.
2012-07-16 Carwadan oo Hargaysa lagu qabtay ayaa waxaa ka qayb galay 110 shirkadood iyo in ka badan 15,000 oo adeegtayaal ah, iyada oo wasiiraduna ay balan qaadeen in sharciyada ganacsiga ee gobolka ay hor'umanrinayaan.
Ganacsiga oo aad u kordhay xeryaha qoxootiga ee Dhadhaab
2012-05-14 Ganacsiga ay leeyiihiin dadka qoxootiga ee ku sugan xeryaha qaxootiga Dhadhaab ayaa wuxuu dalka Kenya sannadkii u soo galiyaa dakhli qiyaastii dhan 2 bilyan oo shillin, sida cilmi baaris lagu ogaaday.
Ganacsiga Soomaalida Kenya oo ka soo kabanaya xiriirkii al-Shabaab ee lagu hafray
2012-04-20 Faham khaldan oo si xun Soomaalida Kenya ugu xiriirinayay al-Shabaab ayaa saamayn xun ku reebay ganacsiga Soomaalida, hayeeshee, aragtidaasi si tartiib-tartiib ah ayay isu soo guraysay.
Tiknoolajiyadda cusub ee isgaarsiinta oo kaalin muhiim ah ka cayaaraysa Soomaaliya
2012-04-19 Shirkadaha gaarka loo leeyahay ee taleefannada ayaa ku guulaystay in ay macaamiishooda Soomaaliyeed siiyaan adeegyo wax-tar ah oo casri ah si ay ugu sahlaan howlahooda, hase yeeshee adeegga internet-ka ayaan wali soo gaarin heerka ay taleefannadu gaareen.
Dadka alaabooyinka dira oo soo dhaweeyay casriyaynta jidadka laamiga ah
2012-04-17 Dib-u-cosboonaysiinta jidadku waxay wax ka tartay xoojinta gaadiidka gobolka iyadoo sidoo kalena wanaajisay dhaqaalaha dalka iyo warshadaha, ayay leeyihiin khubaradu.
2012-03-08 Hogaamiyayaasha ganacsiga Soomaaliya waxay rajaynayaan in soo noolaashaha duullimaadyadii caalamiga ahaa ee Soomaaliya uu dhiiri-galin doono horumarinta ganacsiga isla markaana furi doono fursado cusub.
Al-Shabaab oo soo rogtey in la Carabiyeeyo astaamaha ganacsiga
2012-01-03 Sarkaal dawladda Soomaaliya ah ayaa sheegay in amarka lagu fujinayo calaamadaha aan Carabiga ahayni aanu dan u ahayn muwaaddiniinta Soomaaliyeed.